Ra’isul Wasaare Rooble: Shacabka Soomaaliyeed aadbey uga cawdaan garsoorayaasha – Bandhiga
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta ka qeyb galay shirka sanadlaha ah ee garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay in shacabka ay cadaalad darro weyn ka sheeganayaan hay’adaha garsoorka dalka.
Ra’isul Wasaare Rooble ayaa xusay iney muhiim tahay in si daacad ah shacabka loogu adeego islamarkana laga fogaado wax kasta oo keeni kara cadaalad darro iyo musuq.
Rooble ayaa yiri oo qirtay “Shacabka Soomaaliyeed aadbey uga cawdaan garsoorayaasha waxaan idinkaga digayaa in shacabku idinka cawdo, waxa aad maanta fashaan ayaad bari heleysaan, barri shacab ayaad noqoneysaan maanta cadaalad fala si aad barri u heshaan” Ra’iisul wasaare Rooble”
Rooble ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doonto tayeynta adeegga garsoorka dalka Soomaaliya si muwaadiniinta ay cadaalad u helaan.
“Waxaan bogaadinayaa shaqada baaxadda leh ee Maxkamadaha iyo Xeerilaalintu ay ka hayaan socodsiinta iyo tayeynta hannaanka garsoorka dalka, taas oo muhiim u ah xaqiijinta cadaaladda. Waxaa hubanti ah in isbeddel wanaagsan uu ka muuqdo howlaha Maxkamadaha Iyo xeerilaalinta dalka” Ra’iul Wasaare Rooble